कुनै वस्तु चम्कनको लागी त्यसले कि त कहीँबाट आइरहेको प्रकाश परावर्तन गर्नुपर्छ कि त आफैले प्रकाश उत्पादन गर्नुपर्छ । तर प्रकाश उत्पादन नगर्दा पनि चम्किने प्लास्टिकका ‘तारा’हरू बजारमा पाइन्छन । तपाइले पनि आफ्नो कोठामा यस्ता ‘तारा’हरू टाँस्नु भएको छ होला । यि ताराहरू कसरी चम्कन्छन त ? अँध्यारोमा चम्किने यस्ता वस्तुहरूमा सामान्यत: फोस्फरस नामको […]
Posted in अनौठो संसार,बिज्ञान-प्रबिधि Read More »
रोवटले विद्रोह गरेर एक दिन मानिलाई दास बनायो भने के होला ?
एक पटक सोँच्नुस् त, प्रविधिको बढ्दो प्रभावसँगै एक दिन रोबर्टले बिद्रोह गरेर मानिसलाई दास बनायो भने के होला रु क्याब्रिज विश्व विद्यालयका शोध बैज्ञानिकहरु यस्तै अनौठो अध्ययनमा जुटेका छन् । प्रविधिको बढ्दो प्रभावसँगै एक दिन मानव सभ्यता समाप्त हुने त हैन भन्ने प्रश्नको जवाफको खोजीमा बैज्ञानिकहरु जुटेका हुन् । सेन्टर फर द स्टडी अफ एक्सिस्टेशिअल […]
हाम्रो शरीरका लागि शक्ति खानाहरूको अक्सिडेसनबाट प्राप्त हुन्छ । यस प्रक्रियाले खानालाई ग्लुकोज र पानीमा परिणत गरिदिन्छ । यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानको लागि साइटोक्रोम अक्सिडेज नामक इन्जाइमले मद्दत पुऱ्या्एको हुन्छ । विषसेवनबाट यी इन्जाइमलाई निस्क्रिय तुल्याइदिन्छ र यिनीहरू काम गर्न असक्षम हुन्छन । फलस्वरुप शरीरमा विभिन्न प्रक्रिया सञ्चालन हुन सक्दैनन् र मानिसको मृत्यु […]
Posted in बिज्ञान-प्रबिधि,स्वास्थ्य / जीवनशैली Read More »
न्यूरोड मोवाइल मेला सुरु
काठमाडौ, १४, पौष । बुधबारबाट काठमाडौमा न्यूरोड मोबाइल मेला सुरु भएको छ । नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघले मोबाइल हबको रुपमा चिनिने न्यूरोडमा मेला आयोजना गरेको हो । मेलाको उदघाटन गर्दै सूचना तथा संचारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले मोबाईल लगायतका मेलाहरुले आधुनिक विज्ञान र प्रविधिका बारेमा विस्तृत जानकारी दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । ‘जहाँ मोबाइल बजार त्यहीँ […]
Posted in बिजनेस / अर्थ,बिज्ञान-प्रबिधि,मुख्य समाचार Read More »
मानव मुटु एक मिनेटमा ७२ पल्टमात्रै किन धड्किन्छ ? किन त्यो भन्दा घटी या बढी धड्कदैन ?
मानव मुटु संरचनागत हिसाबले एक ज्यादै सम्बेदनशील र ज्यादै महत्वपूर्ण अंग हो । मानव मुटु दुई फोक्सोहरूको बीचमा बायाँतिर रहेको हुन्छ । कार्डीयक मसलले बनेको मुटुको मुख्य कार्य भनेको अशुद्ध(Deoxygenated) रगतलाई शुद्ध(Oxygenat ed) बनाएर पम्पिङ्ग गरी शरीरका सम्पूर्ण भागमा पुर्याउनु हो ।मुटुमा रहेका ४ वटा कोष्ठक : दायाँ अरिकल,दायाँ भेन्ट्रीकल,बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रीकलहरूले रगत […]
Posted in अनौठो संसार,बिज्ञान-प्रबिधि,स्वास्थ्य / जीवनशैली Read More »
आवाज सुन्ने वितिक्कै मानिसको मृत्यु हुने मेशिन
संसारका धेरै मान्छेहरु संगीत सुन्न मन पराउछन। बजारमा विभिन्न किसिमका म्युजिक सिस्टमहरु पनि उपलब्ध छन, कुनै सस्तो र कुनै त अति नै महंगो पनि भेटिन्छन। तर यस्तो म्युजिक सिस्टमको बारेमा जो कसैलाई थाहा नहुन सक्छ, जसबाट निस्केको संगीतले मान्छेको ज्यानै जान सक्छ भनेर। विज्ञानका अनुसार संगीतको ध्वनी १३५ डेसिमल भन्दा बढी भएको खण्डमा संगीत सुन्ने […]
काठमाडौँ, २६ कार्तिक । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नविकरण, सञ्चालन, अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ‘अनलाइन निर्देशिका’ ल्याएको पाँच महिना बितिसक्दा समेत कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । ऐन नआउनजेलसम्मका लागि अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्न २०७३ जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरे पनि “सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई अङ्कुस लगाउन खोजेको” भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि […]
सामाजिक संजाल र हाम्रो दैनिकी
रतनप्रसाद देवकोटा । मोबाईल नबोकि हिड्ने मान्छेहरु सायदै होलान्।मोबाईल नहुनेको पनि मोबाईल बोक्ने सपना पक्कै छ होला।आज मोबाईलले विश्वलाई सानो गाउँ जस्तै साँघुरो बनाईदिएको छ। तपाईंलाई दुःख,सुखमा साथ दिने साथीको नाम कसैले सोध्यो भने तपाईंको दिमागमा झट्ट मोबाईल भन्ने शब्द निस्किन पनि सक्छ।अनौठो मान्नु पर्दैन।हुन त मोबाईलको आविस्कार सन् १९८० को दशकतिर भएको थियो।छोटो अबधिमै […]
Posted in एक्सक्लुसिभ समाचार,बिज्ञान-प्रबिधि,स्वास्थ्य / जीवनशैली Read More »
पाल्पा । पाल्पा जिल्लाको रुप्से गाविस–४, खसाडीका २२ वर्षीय ताराप्रसाद पाण्डेयले इन्टरनेटको सहायताले हाँस र टर्की पालन गरी आम्दानी लिन सफल भएका छन् । हाँस र टर्की पालनसम्बन्धी अध्ययन र अनुभव नभएपछि अत्याधुनिक प्रविधि इन्टरनेटमा गुगल सर्च गरेर पाण्डेयले व्यावसायिक रुपमा हाँस र टर्की पालनसम्बन्धी अध्ययन गरेर मासिक रु ५० हजार आम्दानी गर्न सफल भएका […]
माइक्रोव्लगिङ साइट ट्विटर विक्रि हुने
काठमाडौं। माइक्रोव्लगिङ साइट ट्विटर विक्रि हुने भएको छ। ३० करोड एक्टिभ युजर रहेको सामाजिक सञ्जाल विक्रि हुन लागेको हो। कम्पनीले आफू विक्रि हुन लागेपछि यहि सातावाट तेस्रोपक्षसँग विक्रिका लागि छलफल चलाइरहेको छ। एक दशक माइक्रो ब्लगिङ क्षेत्रमा एकछत्र राज गरेको ट्वीटरको बिक्रीको चर्चाले विश्वको आइटी बजार तातेको छ। ट्वीटरले आफ्ना सम्भावित ग्राहकहरूसँग छलफलका लागि यसै […]